Breathing Labs – Fayyaa fi wal’aansa fayyaa | Ramsey County
Comments Off on Fayyaa fi wal’aansa fayyaa | Ramsey County
Kunneeni fi tajaajiloonni kan biroo teessoo kanaa gadiitin argachuun ni danda’ama:
Wiirtuu Fayyaa Hawaasaa
TQS Tajaajila Qoccolloo Saalaa
Hordoffii daa’immanii fi dargaggootaa
Maatii Manatti Daawwachuudhaaf
Garee Gargaarsa Harmootaa fi Garee Gargaarsa Abbootaa:
Bakka Itti Daa’ima Harma Hoosisan:
Inshuraansii kan hin qabneeef talaalliwwan gatii gadi aanaa yookin kanneen inshuraansiin isaanii talaallii of keessatti hin ammanneef.
Tajaajilawwan icciitii namoota miidhaan/qoccolloon saalaa mudateef.
Tajaajila kunuunsa fayyaa saalaa fi qorannoo STI/HIV, ittisuu fi yaalii, qorannoo kaansarii harmaa fi fiixee gadameessaa, lilmoo wal jijjiiruu fi tajaajilawwan kunuunsa madaa.
Maatiwwan sagantaa kunuunsa fayyaa Minesotaa keessatti galmaa’an kilinika akka argataniif, guyyaa beellamaa akka qabataniif, geejjiba mijessuuf, inshuraansii fayyaa barbaadu fi fayidaalee argachuuf ni gargaara.
Narsoota Fayyaa Hawaasatin daawwannaan manaa kan taasifamu dubartoota ulfaa, maatiwwan dargaggoo ta’anii daa’ima hanga waggaa 3 qabaniifi.
Dubartoota, Daa’immanii fi Ijoollee: (WIC)
Gorsa nyaataa, deeggarsa harma hoosisuu, nyaata qabiyyeewwan hedduun badhaadhe, akkasumas dubartoota ulfaa fi harma hoosisaniif, dubartoota dhiyeenya dahanii fi daa’immanii fi ijoollee hanga waggaa shanii jiraniif sagantaa hawaasaaf beellama yaalii qabsiisuu ni dhiyeessa.
Gareen Gargaarsa Harmootaa walitti qabama fayyaa hawaasaa ta’ee dubartoota Afrikaanota Ameerikaa ta’an kanneen umuriin isaanii 19 fi isaa olii ta’anii kanneen ulfa fi/yookin ijoollee 0-5 guddisaniidha.
Gareen Gargaarsa Abbootaa ji’a ji’aan kan walitti qabamu ta’ee dhiirota Aafrikaanota Ameerikaa ta’anii fi abbaa ta’aniif kan kaayyeefateedha.
Bakkeewwan kunneen deeggarsa harma hoosisuu/ laphee hoosisuu ni laatu. Koottatii maatiwwan ulfa ta’an fi harma hoosisan/laphee hoosisan kanneen biroo waliin yaada wal-jijjiiraa.
Sagantaan bulchiinsa/naannoo kun mana keessan isiniif yookin maatii keessaniif naannoo mijataa gochuu irratti gahee ni taphata. Liidii balaa geessisan balleessu fi manneen naga qabeessa/fayya buleessa gochuuf deeggarsi/maallaqni jira. Liidii balaa geessisu jiraachuu fi dhiisuu adda baasu fi naannoo liidii irraa walaba ta’e uumuuf ogeeyyiin fayyaa naannoo maatiwwannii - akkasumas ogeeyyii kunuunsa namoota humna hin qabneef godamu gargaaruu ni danda’u.
Maatiwwan daa’imni isaanii xiichaa/asmaa qabaniif deeggarsi kennamu jira. Narsiin fayyaa hawaasa fi ogeessi fayyaa naannoo xiichaa/asmaa mana keessatti akka hin kaane/babal’anneef mana dhufuun adda baasuf deeggarsa ni kennu, ni to’atu akkasumas akka xiqqaatu ni hojjatu. Kiitiwwan qorannoo raadoniiti gargaaru, kana jechuun gaasii foolii hin qabnee fi kaansarii sombaatiif sababa ijoo ta’an $2 argachuun ni danda’ama.
« Gabapentin just for insomnia/sleep : gabapentin